25 / 05 / 2019 | RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka Antalya ayaa la qaban doonaa 19-ka Febraayo	07 Antalya
Maalinta: Meey 25, 2019
Wasiirka Turhan Gave Taariikhda Madaarka Istanbul
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa furay qolka saxaafada ee Isuduwayaasha Duulimaadyada Istanbul (IHMD) shalay fiidkii wuxuuna ka qeybgalay casho sharafta lagu qabtay garoonka diyaaradaha Istanbul. Wasiirka barnaamijka [More ...]
47 Milyan oo lacagta Gunnada EURO ee loogu talagalay Soo-celinta Gawaarida Guriga Lumiyay!
Wasiirka Warshadaha Mustafa Varank 'Gaariga guryuhu wuxuu joogi doonaa waddooyinka sanadka 2022' isagoo si gaar ah u dhaleeceeyay CHP Kocaeli kuxigeenka Tahsin Tarhan, Var Mr. Varank, dhamaadka sanadka 2019, gaari nooca noocaan ah ayaa soo bixi doona, ayuu yiri. Waa hagaag 47 milyan [More ...]
Dhibaatada Mersin Dugsi!
Dekadda Mersin Port waxay kordhisay qiimaha maareynta xamuul boqolkiiba 12 iyo qiimayaasha dhaqdhaqaaqa weelka boqolleyda 85 inta lagu gudajiro nidaamka xaraashka sannadlaha ee 107! Si kastaba ha noqotee, xogta dekada, oo ay saameysay xiisadda dhaqaale ee maanta, ayaa shaaca ka qaaday in yoolalka 2023 ay ka weecdeen. [More ...]
TCDD 356 Qoritaanka Shaqaaleynta Shaqaale Dib Loogu Qalmo oo Loo Baahan Yahay
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), ku dhawaaqay cusub oo rasmi ah ayaa lagu soo daabacay website-ka iyo la siiyey askaraynta musharixiinta bedeli 356 dhawaaqay meelaynta. Musharixiinta la filayo inay keenaan dukumiintiyo ahaan kuwo bedela laakiin aaney imaan [More ...]
Dirinler, oo soo saareysay aaladda mashiinnada iyo cadaadisyada warshaddii 1952 ee Izmir tan iyo 4, ma jabin dhaqankeeda. Warshadda 1952 ee Izmir tan iyo 4 [More ...]
Dhibaatooyinka Gaadiidka Turkiga ee Yurub
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa carrabka ku adkeeyay in dhibaatooyinka ay leeyihiin gaadiidleyda Turkiga ay yihiin kuwa ka mid ah sababihii ay uga soo qeybgaleen shirarkii Golaha Gaadiidka Caalamiga ah (ITF) ee ka dhacay magaalada Leipzig, Jarmalka. Turkey waa maraakiibta ugu weyn Yurub [More ...]
Mashruuca Baaskiilka iyo Wadada
Mashruuca Belt iyo Wadada: Turhan waxay ka qeybgashay Madasha Gaadiidka Caalamiga ah (ITF) oo ku taal Leipzig, Jarmalka waxayna ka jawaabtay su'aalaha ajandaha. Turhan, Turkiga, kuwaas oo ka hawlgala berrinkii xubnaha gaadiidka in tan iyo abuuritaanka duubanayaan ah [More ...]
THY ee Germany-Turkey Noqon Doonaa dhimista on Duulimaadyada MI?
Ka qeybgalka Shirka Caalamiga ee Gaadiidka (ITF) ee Leipzig, Jarmalka, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa kajawaabay su’aalaha ajandaha. Turhan, Turkish Airlines Germany-Turkey dhinaca hubinta yareynta labada dhinac ee lagu raaco hawada [More ...]
Wasiirka Turhan: 'Waxaan ka heleynaa Tareenka Tareenka ee Jarmalka'
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, oo hadal ka jeediyay Madasha Gaadiidka Caalamiga ah (ITF) oo ku taal Leipzig, Jarmalka, ayaa yiri: 'Waxaan ka heli doonnaa xawaare sare oo Jarmal ah'. Turhan, kaabayaasha Turkey ee horumarinta xadiidka tareenka Jarmal [More ...]
Degmada Zeytinburnu, muwaadiniinta aan gaari karin iftara, Cevizliwaxay u adeegtay maraq kulul goobta Beerta Xannaanada. Muwaadiniinta ku soomay joogsiga joogsiga maraqa la adeegay, waxay muujiyeen inay aad ugu qanacsan yihiin dalabka. 5 EE DEGMADA RAMAZAN [More ...]
Munaasabada Ramadaanka ee magaalada Kent oo xasuusisay wadada Tareenka!
Iiddii Ramadaanka ee Kent ee Ramadaan sannadkan, “Bayramla ,r, waxaan reklam u noqon doonnaa reed qoys loo soo bandhigo filimka xayeysiinta ah ee falcelin weyn ka yeeshay warbaahinta bulshada. Isticmaalayaasha warbaahinta bulshada ayaa dhimashadii 25 ee degmada Çorlu ee Tekirdağ sanadkii la soo dhaafay, 340 [More ...]
Ballan-qaadka Wakiilada ee KBU
Jaamacada Karabük, balanta raysalwasaaraha si aad ah loo sugayey ayaa dhacday. Sida ku xusan go’aanka lagu daabacay khabiirada rasmiga ah ee jaamacadda Gazette Karabük, ee hadda ah. Dr. Refik Polat ayaa loo magacaabay. Saxiixa Madaxweynahayaga Recep Tayyip Erdoğan, oo ah dib-u-dejinta Jaamacadda 11 [More ...]
Maanta in Taariikhda: May 25 1954 Turkey Rumeli
Taariikhda ayaa lagu bixiyey wajigeeda ugu dambeeyey ee daynta waxa uu qaatay taariikhda 25 tareenka May 1954 Turkey Rumeli.